Orinasa mamatsy acrylic mihosotra fauxlassur sy mpamatsy | Chengyang
Acrylic Coated Fiberglass dia lamba volon-koditra vita amin'ny tenona tsotra, misy fonosana akrilika tokana amin'ny lafiny roa. Ny lamba coatingand mahomby indrindra dia mahatohitra afo, ankoatry ny namboarina manokana ho fanoherana ny siliga, ny fanoherana ny spark, ary mahatohitra ny lelafo tampoka avy amin'ny fanilo fanilo. Izy io dia miasa amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny fampiharana toy ny fampiasana amin'ny lambam-pandrefesana miorina amin'ny alàlan'ny famonoana alikaola, sakana tselatra ary ampinga hafanana. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana akanjo fiarovana toy ny aprons sy fonon-tànana. Ny loko fenitra ho an'ny fonosana akrilika dia misy mavo, manga sy mainty. Ny loko manokana dia azo atao amin'ny fividianana habetsahana farafaharatsiny.
Lamba firakotra afo, lambam-baravarana setroka afo, saha hafanana avo hafa
horonan-taratasy iray nopetahany sarimihetsika PE, avy eo nofonosina ao anaty kitapo / Carton, ary afatory amin'ny Pallet.
Previous: Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass
Manaraka: Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic
Lamba Fiberglass mahazaka fanoherana herinaratra
Lamba Fiberglass insulated elektrika
Fiberglass mifono akrilika, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Clot Fiberglass, Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass,